Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Umboniso omtsha kaBenny Hill ubuyile kwakhona
Beadle's Malunga – uMboniso weKhamera efihliweyo ubuyele endleleni
I-Benny Hill Show kunye nezinye iintandokazi zikamabonwakude kwixesha elidlulileyo ziya kubuyela kwizikrini zeTV ukusuka namhlanje ebusuku YiKrisimesi yeTV leyo, ijelo le-nostalgia elisasaza ixesha leKrisimesi kwiFreeview, Freesat, kunye neSky.
Ngaphandle UBenny Hill, ijelo liza kuzisa iidiliya zefestive ukusuka kwiishedyuli zangaphambili kuquka Beadle malunga kunye specials TV Christmas ukusuka Kenny Everett, UMike Yarwood, uTommy Cooper kwaye i Qhubeka iqela.
YiKrisimesi yeTV leyo luphawu ngokutsha lwesizini YiGolide yeTV leyo, ugcino lwejelo leTV elisasaza kulo lonke elase-UK kwi-Freeview channel 91, i-Sky channel 187 kunye ne-Freesat channel 178. Imiboniso emininzi ye-TV yeKrisimesi iya kufumaneka kwinethiwekhi ye-TV yasekhaya ye-TV efumaneka kwiindawo ze-20 zase-UK kwi-Freeview channel 7. okanye 8.
Iyure yokuqala kwiKrisimesi yeTV namhlanje (ngoLwesine we-18 kaNovemba ka-2021) ngentsimbi ye-9 ebusuku kuhlawuliswa kabini. Umboniso weBenny Hill.
Eminye imiboniso kwiiveki ezizayo ibandakanya Beadle malunga, umboniso wekhamera ofihliweyo oboniswe ngu-prankster UJeremy Beadle, eyaqala ngo-1986 iminyaka engama-20 iyenza ukuba ibe ngowona mboniso wekhamera ofihlakeleyo wehlabathi uqhubeka uqhuba. IBenny Hill Show okanye iBeadle's Malunga ayisasazwa naliphi na ijelo likamabonakude e-UK iminyaka eli-19.
UBenny Hill ubekwe njengegorha ngoosomahlaya abaninzi banamhlanje, kubandakanya inkwenkwezi yeTV kunye nombhali UDavid walliams owamcela ngakumbi kumabonwakude, esithi kuTwitter ngo-2017: “Ndinqwenela ukuba iBenny Hill ibhiyozelwe ngakumbi kwiTV“. Umhlekisi Tim Vine of Ukungaphumi Udumo lubanga ukuba lugcine zonke iikhasethi zakhe zakudala zaseBenny Hill VHS zisithi: “Andidinwa yiyo, kwaye ndicinga ukuba ujongelwa phantsi kakhulu. "
Ekupheleni UCaroline Aherne, umbhali we-sitcom Usapho lwasebukhosini, uxelele umboniso weChannel 4 ngo-1998: “Ndandimthanda kakhulu uBenny Hill", ngelixa umculi UBen Miller of Armstrong kunye noMiller udumo lwathi: “Umsebenzi wakhe wokuqala waba yimpumelelo. Ungoyena mhlekisi uphumeleleyo kwinqanaba lehlabathi jikelele elakha laveliswa yiBritane. "
I-Benny Hill yayiyi-prime-time ye-TV yaseBritane iminyaka engamashumi amane, okokuqala kwi-BBC kwaye emva koko kwi-ITV apho imiboniso yakhe yaqhubela phambili iminyaka engama-20 ukuya ku-1989. Ukufika kwenyanga kwaye waphumelela iimbasa zokuqala ezininzi ngo-1954 xa waye wavotelwa ukuba nguMntu kamabonakude woNyaka. I-Benny Hill Show ifumene iimbasa ezili-11 zizonke ngexesha lakhe ne-ITV kunye nemiboniso yakhe yathunyelwa kumazwe angaphezu kwe-140. Kodwa ezi zamandulo zaseBritane, amalungelo alawulwa yi-Estate yakhe kunye neThames TV, azizange zinikwe ilayisenisi kuye nawuphi na umsasazi wase-UK phantse iminyaka engama-20.
Oko kuyatshintsha ngokuhlwanje xa iKrisimesi yeTV iqalisa enye iveki ezi-7 zokuqhuba kunye nexesha leBenny Hill ekhethekileyo.
Intloko yeNkqubo yeKrisimesi kamabonwakude, uKris Vaiksalu, uthe: "Sichulumancile kukufumana amalungelo kwimiboniso emibini emikhulu kwimbali kamabonakude waseBhritane, iBenny Hill Show kunye neBeadle's Malunga, ukulungiselela ukuvuselelwa kwethuba lonyaka kulo nyaka. Le miboniso iyinxalenye yelifa lenkcubeko yethu yesizwe. Ukubukela umdlalo ohlekisayo wakudala lisiko leKrisimesi lesizwe kodwa amashumi amabini eminyaka ezi zithandwa zilahlekileyo kwiminyhadala.
"Sonke sifuna ulonwabo lolonwabo emva konyaka ophelileyo. Ababukeli bethu basizalise ngezicelo zokubonisa iBenny Hill kwaye siyakuvuyela ukukwazi ukwenza lo mnqweno weKrisimesi ube yinyani. Kodwa kukho ii-crackers ezininzi kwiKrisimesi yeTV. Senze umgca wekrismesi nostalgia-fest kunye namanye amagama adumileyo kumabonakude kunye nomculo kwiminyaka engamashumi amane edlulileyo. Sijonge ukunika ababukeli bethu ixesha elikhethekileyo leKrisimesi eligcwele iinkumbulo zomlingo. Kungcono ulumke… kuba uBenny Hill kunye noJeremy Beadle babuyile kwibali lakho ngale Krisimesi!"
Kulo nyaka uphelileyo luphawu kwakhona lweKrisimesi yeKrisimesi yatsala ngaphezulu kwe-4.4 yezigidi zababukeli kwiiveki ezine ukuya kwi-27 kaDisemba 2020 (umthombo: BARB). Ijelo ngoku landise ukhuselo lwalo kwaye liyafumaneka kulo lonke elase-UK kwi-Sky kunye neFreesat kunye neFreeview.
Leyo TV iya kubonisa imiyalezo ekwiscreen ezisa ingqalelo yababukeli ukuba eminye imixholo eboniswe kwimiboniso ibonisa imigangatho yexesha apho imiboniso yayiyilwe ekuqaleni.
Izinto zeKrisimesi eziboniswa kwiKrisimesi yeTV zibandakanya:
Umboniso weBenny Hill Ukhetho lweminyaka engama-20 kaBenny Hill eThames TV ngo-1969 ukuya ku-1989
Beadle malunga -umboniso wekhamera ofihliweyo wangoMgqibelo owawungoyena ndoqo kwiishedyuli ze-ITV ukusuka ngo-1986 ukuya ku-1996.
Qhubeka ngeKrisimesi -Izinto ezine ezikhethekileyo zeKrisimesi ezisuka kwiCarry On crew ezenziwe ngo-1969, 1970, 1972 kunye no-1973.
UMike Yarwood oKhethekileyo weKrisimesi – umntu obonisa umdla nohlekisayo yayiyeyona nto iphambili kwiishedyuli zikamabonakude zeKrisimesi kuyo yonke iminyaka yee-'70s kunye nee'80s. Leyo yiKrisimesi kamabonwakude ikhusele amalungelo kwimiboniso yakhe ekhethekileyo yeKrisimesi ukusukela ngo-1982, 1984 kunye no-1985.
IiSpecials zoNyaka oMtsha zikaKenny Everett-I-madcap comedian's New Year Specials ukusuka kwi-1978, 1979 kunye ne-1980 eneenkwenkwezi ezinkulu zeendwendwe ezibandakanya URod Stewart, uCliff Richard, uDavid Bowie, uDavid Essex, uBilly Connolly, uBob Geldof kwaye I-Sex Pistols. Kwaye, njengonyango olongezelelweyo kubalandeli bakaKenny YiKrisimesi yeTV leyo iya kubonisa inkqubo ekhethekileyo eyenziwe ekuqaleni ukukhutshwa kwevidiyo kwaye ayizange iboniswe kumabonakude odlala izihlobo kuquka Cleo Rocos kwaye emva kwexesha Lionel Blair
UTommy Cooper -Ukhetho olukhethekileyo oluvela kuTommy Cooper kuphela, inkosi yomlingo oxubeneyo
UMCULO, UBUGCISA KUNYE NAMAXWEBHU
I-Pavarotti: IKrisimesi ekhethekileyo -I-tenor yodumo yenza iiklasiki zeeholide kule nkqubo kwiCathedral yaseNotre Dame eMontréal, idityaniswe nekwayala yamakhwenkwe, Les Petits Chanteur du Mont-Royal, kunye nekwayala yabantu abadala, Les Abafundi baseMassenet (1978)
I-Irish Tenor Trio: Ibali leKrisimesi eliqhelekileyo -umxube we-eclectic weengoma zeKrisimesi zemveli kunye neengoma zase-Ireland ezenziwa yi-Irish Tenor Trio
100% iiHits zeKrisimesi – iingoma zeKrisimesi ezibetha itshathi ukusuka kwi-'60s ukuza kuthi ga namhlanje
Ixesha lee-documentaries kubantu abadumileyo kunye neziganeko zenkulungwane edlulileyo kuquka ii-'70s Punk eLondon, UPrincess Diana, uJohn Lennon, uKumkani uGeorge VI, uMargaret Thatcher, uDavid Bowie kwayeUMichael Rockefeller
Ukulandela iKrisimesi kwakhona Iinkonzo zeTV eziqhelekileyo ziya kuphinda ziqalise ngeshedyuli entsha nge-4 kaJanuwari 2022.
MALUNGA NOBENNY HILL SHOW
Umboniso weBenny Hill yayiluchungechunge lwaseBritane oluhlekisayo olwahlukeneyo eVaudeville-isitayile esenziwe ngumonwabisi waseBritane uBenny Hill owasasazwa ukusuka nge-23 kaDisemba 1962 ukuya kuma-26 kaDisemba 1968 kwi-BBC kwaye ukusuka nge-19 kaDisemba 1969 ukuya kumhla woku-1 kuMeyi ka-1989 kwi-ITV.
UBenny Hill wazalelwa eAlfred Hall ngo-1925 eSouthampton kwaye ukhunjulwa lusapho kunye nabafundi afunda nabo 'njengomqeshwa weklasi'. Xa wayekwishumi elivisayo, wayeka isikolo waza wasebenza njengomthengisi wobisi ngaphambi kokuba asebenze kuMkhosi waseBritane ngeMfazwe Yehlabathi II. Ngeli xesha, wonwabise amajoni kwimiboniso eyahlukeneyo kwaye wamkela igama lakhe leqonga, uBenny Hill, enika imbeko kumdlalo ohlekisayo uJack Benny. Emva kwemfazwe, u-Hill wadlala kwiiholo zomculo zaseLondon kwaye wafumana ikhefu kumabonwakude emva kokuthelekisa umboniso weBBC. Imiboniso yakhe yaba yinto eyaziwayo kwihlabathi lonke ngeminyaka yee-70s, ifumana iThames TV i-£ 26 yezigidi kwiintengiso. U-Hill wasweleka eLondon ngo-1992 eneminyaka engama-68, kwiinyanga ezimbini emva kokuhlaselwa sisifo sentliziyo.
Ukusweleka kuka-Hill, umlingisi waseMelika uJack Lemmon wathi: "Kwiminyaka yakutshanje iqhula lam endilithandayo ngaphezu kwayo yonke into yayinguBenny Hill, owayeyincutshe kwibala lakhe. Uninzi lwabadlali bamaqhula bahambisa umgubo wepowder; UBenny ukunike inkanunu. "
MALUNGA NEBEADLE MALUNGA
Beadle malunga yaqhutywa kwi-ITV ukusuka ku-1986 ukuya ku-1996 iboniswa yi-joker ebonakalayo, uJeremy Beadle. Lo mboniso wawuza kudlala imigilingwane ecacileyo kunye namaqhinga kumalungu oluntu angafihliyo ashicilelwe ngokufihlakeleyo kusetyenziswa iikhamera ezifihlakeleyo. I-Beadle inikwe i-democratization kamabonakude, ebeka abantu bokwenyani entliziyweni yemiboniso yakhe. Inkwenkwezi yayingumxhasi omkhulu waBantwana abane-Leukemia kwaye ikhulise ngaphezu kwe-£ 100 yezigidi ze-charity, ifumana i-MBE kwi-2001. U-Beadle wabulawa yi-pneumonia kwi-2008 eneminyaka eyi-59.
UMaurice Cole, owaziwa ngokuba nguKenny Everett, yayiliNgesi eliqhula kunye nediski jokhi yerediyo. Emva kwespell kunomathotholo wabaphangi, waba ngomnye woo-DJ bokuqala ukujoyina i-BBC esandula ukuphehlelelwa iRadio 1 ngo-1967. U-Everett emva koko wajoyina i-Capital Radio eLondon emva kokugxothwa yi-BBC ngo-1970 ngenxa yamagqabaza malunga nenkosikazi yoMphathiswa kaRhulumente. U-Everett wayengumhlobo nosaziwayo abaquka uFreddie Mercury, imvumi ephambili kaKumkanikazi, awadibana naye xa wayesenza iCapital Radio Breakfast Show ngo-1974.
Ngasekupheleni kweminyaka yee-'70s u-Everett weza nabalinganiswa bakhe be-zany bakanomathotholo kunye ne-jingles kumabonakude esenza uthotho lwe-ITV (Thames) phambi kokuba abhuqwe yi-BBC1. Imiboniso ye-ITV yayidume ngokubonisa imidaniso liqela lemidlalo, iHot Gossip, eyaculwa ngu-Arlene Phillips, owaba nguDame kwaye wasebenza njengomnye wabagwebi bokuqala kwi-Strictly Come Dancing. Yonke imiboniso yeThames ebonisa i-Hot Gossip ka-Arlene Phillips, kuquka i-specials edume kakubi yoNyaka oMtsha, iya kusasazwa kwiKrisimesi yeTV.
Umhlekisi uMichael McIntyre uchaze uKenny Everett "omnye uTata" wakhe ngenxa yobuhlobo phakathi kwabazali bakhe kunye nenkwenkwezi. Utata kaMcIntyre wayengumbhali weskripthi kumboniso kaKenny Everett.
UEverett wafa ngowe-1995, eneminyaka engama-50 ubudala.
NGENXA YOMNXEKO WE-TV
YiKrisimesi yeTV leyo (eza kuboniswa njenge "Yi-TV Xmas" kwiiseti ezininzi zeTV) iqhutywa nguThat's TV, inxalenye yeQela leMedia.
Leyo TV iqhuba iinkonzo zeTV zasekhaya ezingama-20 kunye nejelo lesizwe lase-UK eliphawulwe njenge YiGolide yeTV leyo, zonke ziguqulelwa ngokutsha ku YiKrisimesi yeTV leyo ukusuka nge-18 kaNovemba ka-2021 ukuya kwi-4 kaJanuwari 2022.
Ziinkonzo zikamabonakude zalapha ekhaya (Ijelo le-Freeview 7/8) linceda amakhaya angaphezu kwezigidi ezihlanu kwiindawo ezingama-20 zase-UK. Leyo TV ihambisa iindaba ezigxile ekuhlaleni kunye nolwazi lwendawo nganye ecaleni kwenkqubo yenethiwekhi 'yomqolo' oquka umculo ongathandekiyo, ulonwabo kunye namaxwebhu.
Lijelo likamabonakude lesizwe lase-UK elasungulwa ngoJulayi ka-2021 kwaye ngoku liyafumaneka e-UK ngokubanzi kwijelo le-Freeview 91, itshaneli ye-Sky 187 kunye nejelo le-178 le-Freesat. YiGolide yeTV leyo de kube nge-18 kaNovemba ka-2021, 'yiKhaya le-Nostalgia' kwaye ngokuyintloko ihambisa umdlalo ohlekisayo, umculo kunye nokuzonwabisa kunye neengxelo malunga nabantu kunye neziganeko zenkulungwane edlulileyo.
Njengenxalenye yomqulu wayo woxanduva loluntu, Leyo TV ivunyiwe yiLiving Wage Foundation njengoMqeshi woMvuzo oPhila ngokwenene.